ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လှူဒါန်းမည့် စစ်ကိုင်း ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲမှ အလှူ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အကြမ်းဖက်ခံပြည်သူများပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းမြို့ နှစ် ၇၀၀ ပြည့် ဘောလုံးကွင်းတွင် ကျင်းပရာ အလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ရရှိကြောင်း သိရသည်။
ဂီတဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်ကို နေလယ် ၁၂ နာရီခွဲအချိန်မှ စတင်ရာ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း၊ နောနော်၊ ပန်စန်၊ အောင်ပိုင်၊ Wai လျှံ၊ D ဖြိုး၊ ဂျဝါအောင်မွန်း၊ စိုင်းလုံ၊ ဖိုဥာဏ်၊ ရတနာမိုင်၊ ခရစ္စတီးနား၊ ကြယ်စင်၊ ချမ်းမေမြတ်နိုး၊ ယွန်းသီရိခင်၊ သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်၊ မဟေသီ စသော အဆိုတော်များ ပါဝင်သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ညနေ ၄နာရီခွဲအချိန် ပွဲမစတင်မီ နှစ်ဘက်ဘောလုံးသမားများအား ဝန်ကြီးချုပ်က ကွင်းအတွင်း သတ်မှတ်နေရာသို့သွားရောက်၍ တစ်ဦးချင်းစီအား နှုတ်ဆက်သည်။ မိုးယံဇွန်၊ နေဒွေး၊ ထူးအယ်လင်း၊ ဇွဲနိုင်ဝင်း၊ ကိုပေါက်၊ ငြိမ်းချမ်း စသော ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင်များနှင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားများ ပါဝင်သည့် ဘောလုံးအသင်းနှင့် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် လက်ရွေးစင်ဟောင်းများ ပါဝင်သည့် ဘောလုံးအသင်တို့ ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ တစ်ဘက်တစ်ဂိုးစီဖြင့် ပွဲပြီးဆုံးသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အကြမ်းဖက်ခံများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နှင့် အဖွဲဝန်ကြီးများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ် ဦးကျော်သောင်းနှင့် တေးသီချင်းချစ်သူများ၊ ဘောလုံးချစ်သူများ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က အလှူရှင်များထံမှ အလှူငွေများ လက်ခံရယူ၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ချီးမြှင့်ကာ ဘောလုံးပွဲကို ပြီးဆုံးသည်အထိ အားပေးကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲတွင် ကွင်းဝင်ကြေးရရှိငွေ ကျပ် ၅၅သိန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်အသင်း(ဗဟို)မှ လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက် လုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ လှူဒါန်းငွေ ကျပ် ၅ သိန်းရရှိခဲ့ရာ အလှူငွေများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဆက်လက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘေဆယ် အိမ်ကွင်း ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေမှုကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက် မန်ယူအသင်း အခက်တွေ
အရောင်အသွေးစုံသော အဇ္ဈတ္တ၏ ကိုယ်ခွဲများ Melo Holic ဇာတ်လမ်းတွဲ
အခွန်နှုန်း သက်သာသော ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ အာဘေးနှင့်ထရန့် တွေ??